समाचार र सोसायटी, महिलाका मुद्दाहरू
महिलाहरु को अंतरंग स्वच्छता महिला प्रजनन प्रणाली को स्वास्थ्य को हेरचाह हो। अधिक स्वच्छ उपचारहरू लिइन्छ, महिलालाई स्वस्थ बनाइन्छ। आधुनिक वातावरणीय अवस्थाहरू राम्रो जस्तो हुँदैन किनकि हामी चाहन्छौं। झन्डाहरू विरुद्धको लडाइँमा महिलाहरूले अनुहारको छालाको स्वास्थ्य र सौन्दर्यको संरक्षण गर्न कोसिस गर्छन्, अन्तरगत स्वास्थ्यको बारेमा बिर्सन्छ। यो सही तरिकाले अन्तरियमित ठाउँहरूको लागि हेरविचार गरिएको हेरचाह हो कि महिलाको स्वास्थ्य न केवल निर्भर हुनेछ, तर जन्म दिन सक्ने क्षमता हो।
अंतरंग स्वच्छता को आधार
महिला प्रजनन प्रणाली को अधिकांश रोग महिलाहरु को जननांग अंग को लागि अनुचित हेरविचार को कारण ठीक हो। केवल एक महिलाको मात्र थाहा छ कि एक बच्चालाई सहन र जन्म दिने क्षमताले आत्माको उचित अनुमोदनमा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ महिलाहरु छन् जुन महिलाहरु को अंतरिम स्वच्छता के हो र यस बारे मा ठीक तरिका देखि बाहिर को बारे मा बिल्कुल केहि नहीं ठेगाना। अरू, यसको विपरीत, अंतरजातीय स्थानहरू सफा गर्न सबै प्रकारका जल्स र साबुन प्रयोग गर्न धेरै उत्साहित छन्। एकै समयमा, महिलाहरूले सबै चीजहरू प्रयोग गर्छन्, भित्री स्वच्छताका लागि मात्र होइन जुन पनि ती हुन्। लापरवाहीको रूपमा र स्वच्छताको अंतरंगताको लागी धेरै जटिक्कनेन्नो रवैया कुनै पनि राम्रो प्रतिज्ञा गर्दैन।
के बिग्रेको स्वच्छ महिलाको नेतृत्व गर्न सकिन्छ? बाह्य जननांग निकायहरूको धेरै सावधान प्रशोधनको साथ हेरविचार उत्पादहरू जननात्मक अंग भित्र प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले एसिड ब्यालेन्स अल्ल्किनमा परिवर्तन ल्याउँदछ। जब योनि परिवर्तनमा सन्तुलित हुन्छ, रोगजन्य सूक्ष्म कोशिकाहरू प्रवेश गर्न सक्दछ, जुन महिलाको सम्पूर्ण यौन तवरमा भोग्न सक्छ। अपर्याप्त गुण सापेक्ष स्वच्छता संग, यस्तै समस्या उत्पन्न हुन्छ। सुनने को मतलब यो महिला को हानिकारक नहीं हुनेछ को खोज को लागि धेरै महत्वपूर्ण छ।
महिलाहरु को अंतरिम स्वच्छता, स्वच्छता उत्पादन
अंतरंग स्वच्छताको लागि एक साधनको रुपमा, प्रायः महिलाहरूले साधारण साबुन प्रयोग गर्छन्। यो एक बच्चा, घर वा बौछार जेल हुन सक्छ । केवल केहि प्रयोग एक विशेष तरल साबुन या फोम, अंतरंग क्षेत्रहरु को लागि विशेष रूप देखि डिजाइन गरियो।
निष्पक्ष यौनको स्वास्थ्य प्रायः मा निर्भर गर्दछ कि उनी महिलाहरु को अंतरिम स्वच्छता कसरी देखाउँछन्। स्वच्छता उत्पादनहरू विशेष गरी अन्तरिक्ष स्थानहरूको हेरचाहको लागि डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ। तपाईं सामान्य साबुन र स्नान जेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, किनकि तिनीहरू महिला अंगहरूको नाजुक छाला सुकाइदिन्छन्, खराब रूपमा एसिड ब्यालेन्सलाई असर गर्छ। केवल विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको स्वच्छता उत्पादनहरू महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव छैन। तटस्थ पीएच को कारण , जो जीनियल्स को अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ , महिला स्वस्थ रह्छ।
महिला स्वास्थ्यको ग्यारिटी सही महिला अंतरंग स्वच्छता हो। यस प्रयोजनको लागि इरादा छैन कि मतलब प्रयोग गर्नु हुँदैन। धेरैजसो केटीहरु सेक्स अंग को हेरविचार गर्न एंटीबैक्टेरियल साबुन किन्न चाहन्छन। वास्तवमा यो एक सकल त्रुटि हो, जुन महिलाको स्वास्थ्यको लागि घातक हुन सक्छ। यो बटेरिया को हत्या को गुणहरु को कारण, साबुन को हत्या र प्राकृतिक माइक्रोफेरो को सबै लाभकारी जीवाणुहरु को कारण हो। एंटीबैक्टेरियल साबुन केवल धोने हातको लागि उपयुक्त छ।
अंतरंग स्वच्छता, एक कदम
महिलाको अन्तरगत स्वच्छता के हो? निष्पक्ष सेक्सको प्रत्येक प्रतिनिधिको बारेमा सोच्नु पर्दछ कि एक दिन त्यो मर्नु भएको छ। ईमानदार भई आफैलाई जवाफ दिँदै, तपाईं आफ्नो अन्तरक्रियात्मक स्थानहरूको हेरचाहको गुणस्तरबारे निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुनेछ। लगभग सबै महिलाहरु लाई गर्भनिरोधक को कचरे को सटीकता र उनको दैनिक राशि को बारे मा पूछने को शर्मिंदा हो। र सबै स्त्री रोगज्ञहरू भन्छन् कि हरेक बिहान र हरेक साँझ धुनु आवश्यक छ। यदि दिन को समयमा यौन संक्रामक थियो भने, त्यस पछि यो स्वच्छ स्वच्छता प्रक्रिया को लागी पनि आवश्यक छ।
महिलाहरु को अंतरंग स्वच्छता के हो? तपाईलाई हरेक महिलाको बारेमा थाहा छ? न्यानो पानीको साथ राम्ररी धुलो पार्नुहोस्, ताकि निविदा यौन अङ्गहरू जलाउन सक्दैन। हातको आचरण अगाडि अगाडि सुरू गर्न सकिन्छ र सजिलै संग छाडिएको बेला सुत्न सकिन्छ। यो यो धुलाई छ कि यो रोगजनक जीवाणु जीवाणु परिचय को बिना गुणात्मक जीनियहरुमा सफा गर्न मदत गर्नेछ।
धुलाई पछि कहिल्यै, तपाईं आफैलाई सुत्न सक्नुहुन्न र स्वच्छ जीनिटल्सलाई तौलियाको साथमा रगतमा रगतमा नबस्नु हुन्न। पहिले, त्यसोभए तपाईं छालालाई हान्न सक्नुहुन्छ, र दोस्रोमा, शरीर स्वाभाविक रूपमा सुक्नुपर्छ। महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको आधारभूत आधारभूत नियमहरू थाहा पाएका छन्, लामो समयसम्म नै डिस्पोजेबल पेपर तौलियाहरू पकाउन थाले। यो एक हल्का, चिकनी ब्लुटटर संग यो गर्न राम्रो छ। यदि महिलासँग कुनै स्वास्थ्य समस्या छ भने, उनीहरूले पेपर तौलिएहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ, वा दैनिक पानीमा तौलिया धुनु पर्छ। यस्तो उपायहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि पुन: प्रयोज्य प्रयोगको लागि गीला तौलियामा कुनै जीवाणुहरू बाँकी रहन र गुणा बढाउँछ।
महिला रोगको अनुपस्थितिमा, एक तौलिया हरेक दुई दिनमा परिवर्तन हुनुपर्छ। यो याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तौलिया, जुन genitals पोष्ट गर्दछ, केवल अंतरंग क्षेत्रहरूको लागि उद्देश्य हुनुपर्छ। प्रायः महिलाहरू यो बिर्सन्छन्, र एक तौलियाले सम्पूर्ण शरीरलाई अनुहारबाट छोप्छ, र खुट्टाका साथ समाप्त पार्छ।
महिलाहरु को अंतरंग स्वच्छता के हो, के यो धोने को लागि र यो कसरि गर्न को लागि सही - हामी पहिले देखि नै ठेगाना हो। तर महिला असामान्य स्वच्छता न केवल विशेष उपकरणको मद्दतसँग सही धुलाई छ, तर पनि अंडरवियरको जरा पनि। महिला प्रतिनिधिहरू सुन्दर अंडरवियर पहिरन गर्ने धेरै मनपर्ने छन्। अक्सर, सबै भन्दा सुन्दर र मोहक पैंटीहरू सिंथेटिक सामग्रीबाट बनाइएका छन्। महिलाहरु को स्वास्थ्य मा गैर-प्राकृतिक सामाग्री को प्रभाव को बारे मा केहि मान्छे को बारे मा सोचना। निस्सन्देह, तपाईंले सुन्दर बलिदान गर्नु हुँदैन। बस स्पष्ट रूप देखि बुझ्न आवश्यक छ कि कृत्रिम सुन्दर जाँघिया महिला को शरीर मा तीन घंटों भन्दा अधिक हुनु पर्छ। डाक्टरहरूले भन्थे कि सिंथेटिक अंडरवियर राम्रो तरिकाले स्राव अवशोषित गर्छ, जसमा जसमा ब्याक्टेरियाको प्रजननको लागि धेरै अनुकूल वातावरण हुन्छ।
जब तपाईं यस दिन अंडरवियर लुगा लगाउनुहुन्छ, एक महिलाले सबैभन्दा साधारण थोरै प्राप्त गर्न सक्छ, जसको परिणाम प्रजनन प्रणाली को अधिक गम्भीर रोग हुनेछ। त्यहि पैंटी र थन्गको लागि जान्छ। तीन केबुलहरू निश्चित रूपमा सुन्दर छन्, तर उनीहरु हरेक दिन लुगा लगाउँदैनन्। यस तत्वको अंडरवियर मात्र विशेष अवस्थामा पर्दा गरौं। डाक्टरहरूले लामो समयसम्म चिसो लगाउन सिफारिस गर्दैनन्, किनकि तिनीहरू उनीहरूको जीनत्वहरू झर्काउँछिन्, जो किशोरीको डराउँछिन्, र यी धेरै कर्डहरू जीवाणुहरूको गुनासोबाट योनिबाट फर्किने सीधा तरिका हुन्।
दैनिक पहिरनका लागि यो प्राकृतिक कपासबाट बनाएको जाडोको प्रयोग राम्रो छ। तिनीहरू कम आकर्षक, तर आरामदायक, व्यावहारिक र सुरक्षित हुन दिनुहोस्।
महिलाहरु को अंतरिम स्वच्छता: नियमहरु को लागि पहल को लागि पहने
प्राकृतिक रूपमा, पैडहरूको प्रयोग महिला स्वच्छतामा लागू हुन्छ। आधुनिक बजार, जसले महिलाको स्वच्छताका लागि उत्पाद प्रदान गर्दछ, दुई प्रकारको gaskets प्रस्तुत गर्दछ। उद्देश्य को लागि पहिलो र आधारभूत - पैड, मासिक धर्म चक्र को समयमा पहने को लागी। पैड छनौट हुँदा, कसैलाई छाला र एलर्जी प्रतिक्रियाहरू त्वचाको प्रवृत्ति द्वारा एक निर्देशित हुनुपर्छ। आजसम्म, धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरूलाई तरल अवशोषित गर्ने प्रस्ताव प्रदान गर्दछ, कि महिलालाई छनौट गर्न निर्णय गर्न गाह्रो छ। जो कि ग्रोइन क्षेत्र मा लगातार रश र एलर्जीहरु को लागि, वहाँ hypoallergenic पैड हो, केवल फार्मेसीहरुमा बेचे।
धेरै महिलाहरूले अनावश्यक रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य लिन्छन्, र यसैले सोच्ने कुरा हो कि दिनभरि एकपटक मनुष्यको समयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश, दुखी अनुभवले यो अल्प मात्रा पर्याप्त छैन भनेर देखाउँछ। मेडिकल कर्मचारीहरूले भने कि महिलाहरूले प्रत्येक तीन देखि चार घण्टा पैड परिवर्तन गर्छन्। यो स्वच्छता उत्पादनहरू परिवर्तन गर्ने आवृत्ति हो जुन यसले ब्यापारिकाको ब्याक्टेरिया को शुरुवात नगरी स्वास्थ्य को लागी खपत गर्न मद्दत गर्दछ।
दोस्रो प्रकारका गोस्केटहरू दैनिक हुन्छन्। महिलाहरु जो दिन मा दुई या तीन पटक धोने को अवसर छैन दैनिक पैड को उपयोग गर्न को आदी हो । तिनीहरू व्यावहारिक छन्, लुगा लगाउने, प्रयोग गर्न सजिलो, लाँड्रीको सफाई राख्नुहोस्। तर यहाँ त्यहाँ बिरामी छन्। हरेक दिन प्रजनन प्रणाली को स्वास्थ्य को लागि पनि असुरक्षित हुन सक्छ। तिनीहरूले ब्याक्टेरिया विकास गर्छन्, र दिनभरि सबै नामावलीहरू, नाजुक छाला सँगसँगै दिनभरि। प्रायः डाक्टरहरू यस्ता प्रकारका प्याडहरू छैनन्, किनभने तिनीहरू खतरनाक मान्छन्।
ताज को अधिकतम र लाँड्री को सफाई को लागि, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, स्वास्थ्य को लागि कुनै नोकसान छैन, दैनिक पैड नियमित रूप देखि पूरा काम दिन को समयमा नियमित रूप देखि परिवर्तन हुनु पर्छ। जब यस्तो उपकरण छान्नु भएको छ, तपाईलाई gaskets को गन्धमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि प्याकेजले "ताज़ा फ्रिटिट" वा "स्वर्गीय ताज", "पुष्प सुगन्ध" भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता पैडहरूबाट यो अस्वीकार गर्न लायक छ। प्राकृतिक र प्राकृतिक छैन सबै कुरा महिला प्रजनन प्रणाली को स्वास्थ्य को हानिकारक हो। स्वाद, जो दैनिक जीवनको निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ, एलर्जी हुन सक्छ। सामान्यतया, डाक्टरहरूले दैनिक डायरीहरू पहन्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्दैनन्, मात्र मासिक चक्रको अन्तिम दिनमा मात्र प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछ।
महिला टाम्पोन प्रयोग गर्दा, उनीहरूको समयमै परिवर्तनको हेरचाह गर्न सार्थक छ। यो एक स्वाब संग सुत्न को लागी कडा तरिकाले निषेध गरिएको छ, किनकि यो विषाक्त सदमे सिंड्रोम हुन सक्छ। साथै, मासिक धर्म चक्रको पहिलो दुई दिनमा टाम्पोन नखोल्नुहोस्।
महिलाहरु को अंतरंग स्वच्छता को प्राथमिक नियमहरु को अवलोकन, हरेक महिला केवल आफु मा आत्मविश्वास नहीं बल्कि स्वस्थ पनि हुनेछ। धुनुको लागि साधन चयन गर्न विशेष हेरचाह लिनु पर्दछ, किनकि यो उनीसँग हो कि सम्पूर्ण प्रजनन प्रणालीको स्वास्थ्य सुरु हुन्छ। स्वस्थ हुनु भएको जस्तो जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ।
यौनवादको विज्ञान: काममा लिंग विषयहरू किन समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ?
घरमा स्तन स्तन ग्रंथहरू बढाउनुहोस्। के यो सम्भव छ?
विभिन्न देशहरूमा सौन्दर्य स्तरहरू
गर्भनिरोधक को अर्थ। हामी उहाँबारे जान्दछौ
दालका साथ मासुको मासुको लागि टी: समीक्षा
कोस्ट्रोमा प्रान्त: काउन्टी र यसको इतिहास
कसरी आफ्नो शैली राख्न - सहायक
विशेषताहरू, आवश्यकताहरु र मानक: मनिटर गर्न आँखाबाट दूरी